Изучение английского языка в Америке (Информация о WESLI в бирманский) | WESLI Изучение английского языка в Америке (Информация о WESLI в бирманский) – WESLI
Изучение английского языка в Америке (Информация о WESLI в бирманский)
ШКОЛА ПРОФИЛЬ История школы
WESLI (Висконсин Английский второй язык Институт) ကို Wisconsin ပြည်နယ်၏ မြို့တော် Madison တွင် ၁၉၈၁ခုနှစ်က တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် တက္ကသိုလ်တက်လိုသော ကျောင်းသားများ၊ မိမိ၏ အင်္ဂလိပ်စာအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်လိုသူများ နှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်အကိုင်များရရှိရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာလိုသူများအတွက် WESLI တွင် Level ၈ခုခွဲကာ သင်ကြားပေးနေပါသည်။
WESLI တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၄၀ခန့်မှ ကျောင်းသား ၁၈၀ခန့်တက်ရောက်လျှက်ရှိကြသည်။ WESLI တွင် တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားတိုင်းအတွက် လေဆိပ်တွင် လာရောက်ကြိုပေးခြင်း၊ နေထိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း နှင့် တက္ကသိုလ်တက်ရောက်ရန် ဆွေးနွေးအကြံပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ WESLI ကို State of Wisconsin Educational Approval Board မှ တရားဝင်လိုင်စင်ထုတ်ပေးထားပြီး American Association of Intensive English Programs (AAIEP)0СЕА0проверяется в соответствии с закона штата школьников и студентов, которые хотят принять участие в американских школах разрешено 0. Для получения дополнительной информации, WESLI0адрес веб-сайта www.wesli.com0может быть доступно.
мониторы безопасности, Желаемое, Красота и удовольствие
КЛАССЫ & ГРАФИК: Класс и расписание
Английский WESLI профессионально-технических училищ в состоянии базовый уровень0уровень 8 двухуровневый преподается. (WESLI учебный план на странице6образца,0на веб-сайте, "список в этом году университетского учебного года(список курсов текущая сессия)"Вы можете просматривать либо.) အတန်းတစ်တန်းလျှင် ပျှမ်းမျှ ကျောင်းသား၉ဦးသာ လက်ခံလေ့ရှိပြီး WESLI တွင်တက်ရောက်ရန် ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေဆိုရမည်ဖြစ်သည်။တက်ရမည့် စာသင်ကာလ တစ်ခုလျှင် နှစ်လကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ပြည့်ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ကျောင်းတက်ချိန် တစ်ပတ်လျှင် ၁၈နာရီမှ ၂၂နာရီ၊ အိမ်စာအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ၁၀နာရီမှ ၁၅နာရီခန့် သင်ယူရမည်ဖြစ်သည်။ ပညာသင်ကာလတစ်ခုပြီးလျှင် ဆက်လက်တက်ရောက်လိုသော ကျောင်းသားများသည် မိမိ တက်ရောက်ရမည့် သင်တန်းကာလ အတွက် ကြိုတင်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး လျှောက်ထားရမည့်အချိန်နှင့် ပညာသင်စားရိတ်ကို ကျောင်းလျှောက်လွှာ (или)0можно ознакомиться на сайте.
УЧИТЕЛЯ & СОТРУДНИКИ: Учителя / воспитатели и0Персонал
Английский специализированное обучение через Шаг 8
(Строка2часа в неделю в то время, это займет2дня3дня.)
ОВЕРСИЗ ПРИЕМ CONDITIONAL (ОТЕЦ): Исключения иностранных студентов0(О)
ОСА Когда я должен использовать ?
ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိသော်လည်း WELSI သို့လာရောက်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်သည့် ကျောင်းသားဗီဇာရရန် အလွန်ခက်ခဲ့သော နိုင်ငံများမှ ကျောင်းသားများ အသုံးပြုသင့်ပါသည်။ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိထားသော တက္ကသိုလ် သို့မဟုတ် ကောလိပ်မှ ခြွင်းချက်ဝင်ခွင့်စာတစ်စောင်ပို့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး WESLI မှ ထိုအချက်ကို ကျောင်းသား၏ I-20(Школа0Приглашение) Будет отображаться на.
Как я могу получить ОСА Может
ОСА применять всеобъемлющие данные(Образование, деньги) студенты WELSI смогут обратиться за помощью консультанта из.
Флюиды будет применять соответствующие исследовать, как американские университеты
Часть времени университетские курсы
Другие бесплатные услуги0– ярмарки, Перекрестные помехи, ...
РАЗГОВОРНЫЕ ПАРТНЕРЫ: Перекрестные помехи
Координатор WESLI Деятельность хотите узнать обмен язык будет подключен к университету.
За две недели до своего путешествия во времени и другой информации отправить Madison Airport будет оставаться оплачена заранее, или если вы живете с местными жителями и их семей будут отправлены.
БОЛЬШЕ : WESLI မှ ၀န်ထမ်းများက immigration အတွက် အကြံဥာဏ်ပေးခြင်း ၊ ဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုခြင်း၊ ဆရာဝန်ရှာပေးခြင်း နှင့် အခြားပြဿနာများကို ကူညီပေးရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
Развлекательных и культурных рекреационных и культурно
ЖИЛИЩНО - Комфортная & Доступное комфортно и за вычетом расходов жилье
WESLI общежитие или в семье (Местный живет дома) Прием США семейный дом координатор WESLI Жилищно (Сотрудник по вопросам управления жилищного строительства) Устройства будут введены в действие. В общей жилье (Студенты, проживающие в коллективном доме) အခြေအနေမျိုးတွင် အိမ်ယာစီမံရေးမှူးသည် နိုင်ငံပေါင်းစုံမှ ကျောင်းသားများ အတူတကွနေထိုင်နိုင်ရန် အတတ်နိုင်ဆုံးစီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နေထိုင်စဉ်အတွင်းတွင်လည်း လိုအပ်သမျှကို ကူညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ အဆောင်နေခြင်း သို့မဟုတ် homestay (Местный живет дома) နေခြင်းတို့အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်မှာ တူညီသလောက်ရှိပြီး မိမိရွေးချယ်သောနေရာတွင် ၂လအနည်းဆုံးနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကျောင်းလျှောက်လွှာရှိ ကုန်ကျစားရိတ်ဇယားတွင် လက်ရှိဈေးနှုန်းများကို သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ американской семье: Жизнь с американской семьей 0
СТУДЕНТ (F-1) VISA: студент (F-1):
*Люди, которые применяются для F-1 Студенческая виза всей школы документа ниже30 должны быть отправлены до получения документов, выданных.
1. Обучение Применение 0
Применение курса00 WESLI сайт (www.wesli.com)Отправить дополнительные.
Совместное обучение приложения электронной почты (или) Отправить по факсу.
Плата за $ 100 Кредитная карточка (Visa или Master Card) (или) денежный перевод (или) Открыть счет в банке в Соединенных Штатах отправить свои чеки.
Финансовые документы по факсу(или) Отправить по электронной почте.
Жизнь в школе, которые будут использоваться во время школьных каникул и для еды, чтобы показать доказательство достаточных финансовых возможностей из следующих документов должны быть отправлены.
, Копия личных банковских счетов заявителя
B. родитель заявителя (или) Копии школы, чтобы поддержать свой счет (Поддержка во время учебы в Соединенных Штатах должны быть утверждены 0.)
C. правительство (или) Стоимость организации во время учебы для письменного документа.
I-20 с помощью UPS ရယူလိုပါက школы, перечисленные в заявке, должны дать почтовый выход.
Выше3получает как общеобразовательные школы и I-20 и0офис открытое приглашение будет отправлен в течение 2-х дней.